Janaayo, 2009 cadastre, Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Bentley Sign waa codsi gaar ah oo lagu dhisay Bentley Map ka soo version XM V8.9 iyo sida magaciisu ku sheegay, waa tan; ee Cadastre. Hawlgalkeeda wuxuu u baahan yahay Bentley Map, laftiisuna waxay u dhigantaa habka loogu talagalay dayactirka cadastaroolka.
Muhiimadda ugu weyn ee codsigan waxay ku jirtaa isdhexgalka topolojiga, wax soo saarka guriga laga soo bilaabo xilliga uu geometries noqon karo gudaha xogta. Sidaa awgeed, shey dhuleed ah ayaa fahmi kara haddii mid kale uu deris yahay, haddii ay wadaagaan xuduudaha, haddii ay isku dhacaan oo xitaa haddii ay ku jiraan shey gudaha ah oo ka dhigaya dalool.
Iyadoo tan Bentley aysan ka tagin jaahwareerka lagu dhaleeceeyay qaababka Lemmen kuwaas oo ku adkaysanaya isticmaalka centroids (nodes) iyo gobollada (xuduudaha), maaddaama ay sidoo kale u muuqato in ka horeysa daboolka ArcInfo. In kasta oo ay sigaar cabbaan oo aad u fiican, Geography waxay awoodi kari waayeen in ay maareyn karaan joomatari adag oo la mid ah sidii guri kale oo gudaha ah, sababtoo ah waxay u rogtay unug (unug) iyaga oo ka dhigaya falanqayntooda aan caadiga ahayn; waxaa loo yaqaan geometries kakan laakiin waxay aad u badan yihiin cadastare, yaanan dhihin kartoonka.
From version 8.5 ee technology Microstation yaqaan XFM, halkaas oo qaab-dhismeedka XML ah ayaa weli ku kaydsan xogta tabular schema qeexay, ka dibna map ku yeelan karaan macluumaadka ay u baahan yihiin ku lifaaqan miiska la fuliyo. Sidoo kale qorshaha waxaa lagu dhejin karaa si uu u arko xogta laga helo diiwaanka dibedda ah oo tani ay tahay midda kaliya ee lagu dhexdhexaadin karo, wax laga beddelayo ama la arki karo.
Nidaamka dhismaha ee Bentley Cadastre waa mid aad u xoogan, xitaa loogu talagalay in lagu dhexgalo maaha oo kaliya mashaariicda Mashruuca Bentley Map. Kobcinta horumarka hoosta xiriiriyaasha:
Oracle Spatial, 2 iyo xattaa 3 xitaa
ArcGIS, saddex lakab
Dabcan, waxa uu leeyahay isdhexgalka buuxa ee mashaariicda XFM ee qaabka dgn iyo wuxuu isku xiraa RDBMS / DGN kasta oo taageera Microstation.
Xaddidaadaha Microstation Geographics
Mid ka mid ah khasaarihii ugu weynaa ee kaadhadhka wareega ayaa ahaa in dejinta heerarka topolojigu ay adkaato. Intaa waxaa dheer, khayraadka dhan ee server-ka ayaa la cunay sababtoo ah qodobbada sare ee CAD-du waxay ku adkeeyeen falanqaynta goobta ama su'aalaha fudud ee xogta.
Iyadoo ay sabab u tahay dhibaatadan ku jirta darajada sare ee heerka xogta, falanqaynta taayirada xasuusta. Mid ka mid ah faa iido la'aanta ayaa ah xuduudaha adag ee aan haysto (oo aan haysto?) Juqraafi ahaan nadiifinta nadaafada ayaa lagama maarmaan u ah inay u qaadaan 0.00001 dangles y gabal si loo sii wado shuruudaha miisaaniyada ama miisaaniyada ee daabacaadda vpr.
Faahfaahintan waxay ahaayeen kuwo aan macquul ahayn iyagoo tixgelinaya in hanti aan looga baahnayn cabir ka yar hal millimitir. Iyo waxa la yiraahdo ku saabsan sharafnimada u dhaxaysa faylasha tixraaca ... oo aan u baahnayn kaliya xuduudaha la wadaagay laakiin sidoo kale noodhadhka ama geometries lama aqoonsan markii la abuurayo lakabyo dusha sare.
Bentley Cadastre topology fulisaa saddex nooc oo geometries, qabashada magacyada feature Noode (Point), feature xuduudda (gobolka xiran) iyo Feature jagadii (geesoolayaasha). Iyadoo fikirka jagadii (la mid ah AutoCAD Map) ayaa la fulin, waxaad ka arki kartaa in Bentley habaynayso adkeysi on bixiyc of Boundary / Guntin, isagoo intaa ku daray Boundary option / qoraalka hadda maamuusi doonaan inay geometry firfircoon ka dhigan. Xooggan Tani waxaa laga arki karaa qalabka lagu ilaaliyo xakamaynta dusha sare ee duullimaadka:
Muuqaalka khadka: Kaliya qaybta
Muuqaalka Xuduudaha: dhaqaaq, miisaan, isbeddel, hareeraha geesaha, isbarbardhig, u guurto la xiriir, beddelida, fidinta, jarjar galka, tirtirto vertex, lafa
Muuqaalka Node: dhaqaaq, miisaan, isbeddel, hareeraha geesaha, isbarbardhig, u guurto xiriirka
Waa suurtagal gudahood database (Xusuuso kaliya Oracle astaanta) dhigay xeerarka topological waayo, markii si ay u dhisaan guryaha cusub ama aad daryeel (dayactirka) qaylodhaan waxaa shaqeysiin si aad u samayso isbedel kala ama hagaajin nidaamka auto ah.
Hirgelinta qalabyada isticmaalka kalluunka
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu wanaagsan ee Bentley Register waa in ay ujeeddo u tahay waxa ka dhacaya geedi socodka dhismaha, maamulka iyo dayactirka cadastaroolka ee qaabka joomatari ee loogu talagalay badhannada gaarka ah ee la dhisay.
Dhab ahaantii maaha wax ficil ah oo aan la samayn karin Microstation Geographics, laakiin waxa la hirgeliyay waa farsamada xfm iyo otomaatiga in kiisaska intooda badan ay tahay in laga qabto Project Wise iyo Vba.
Sidoo kale amarrada ugu caansan ee dhismaha xogta iyo habeynta ayaa lagu darey awoodaha xfm si ay u habeeyaan iyaga oo isticmaalaaya cadastre. Qalabka ugu dambeeya ee la mid ah cogo wuxuu siinayaa shakhsiyad dheeraad ah.
Abuuritaanka suufkaOo intaas oo dhammu ku lug update automatic ah ee aagga, isuduwaha sanduuqa ku jiraan geometry iyo wareega ... cad in la ahaanayta by Administrator Geospatial sidoo kale u cusbooneysiin laga yaabaa xog kale sida heegan ah haddii loo baahdo qiimaynta kormeerka, haddii aad note diri marin-u-siinta Diiwaanka Hantida, urur-ka ah mashruuca shaqo ee Wise ee mashruuca.
Isbedelka tooska ah
Xirmooyinka raajada ilaa dhamaadka
Mashruuc xuduud u ah barta
Gaadiidka loo soo saaro khadadka shaqada
Isku dheji daro culus oo ka yimaada noodhka
Ku dhaji daro sayniska laga bilaabo khadka shaqada
Dismember, tani waxay leedahay sifooyin dhowr ah oo xiiso leh kuwaas oo ay ku jiraan qayb ka mid ah qulqulka aan caadiga ahayn laga bilaabo aasaasiga, waxaana loo qeybin karaa qaybo siman. Waxaad sidoo kale raadin kartaa aag gaar ah oo leh khad toos ah.
Koox, midkan ama dhowr shirqool ayaa lagu qori karaa, habka ayaa loo dejin karaa si hantida cusub ay u sii haysato furaha cad ee aagagga haray ama haddii mid cusub la soo saaro. li>
Isbedel, tani waa marka ay dhacdo in la xadeeyo xuduud, ilaalinta daacuunka dusha sare ee digaagga.
Hirgelinta waxay ka sahlan tahay ka guuridda
Mashruuc kale waxaan ka wada hadli doonaa arrintan, maaddaama hirgelinta ay tahay mid sahlan sida dhismaha laga bilaabo xakameynta, laakiin u guuritaanka mashruuc adag Juquraafi oo ku yaal Bentley Map ma aha in ay noqoto mid aad u fudud sababahan oo kale:
- Noocyada Juquraafiyadu waxay yeelan karaan muuqaalo badan, u guurista Bentley Map waxay u baahan tahay in ay kala soocaan waxyaabahaan u gaarka ah shayada gaarka ah iyo abuurista qawaaniinta daacadnimada.
sida caadiga ah DGN -Objects ka faa'ideystay archive taariikheed oo ay halkaas ku kaydiso Isbedelo ay ... iyo waxay noqon lahayd in cadaabta, maxaa yeelay, ma jiro wax qalab si aad u hesho in ay saldhig tabular.
-Waxaa qalab vba dhisay qalabayn alwaaxa: diiwaan maps, beeraha link, xisaabi apc (degaanka, wareega, isuduwaha), renumbering, falanqaynta topological ... iwm, waa in la beddelo, waayo, wax kasta oo ay ku sameeyeen iyo keen on badhamada.
- Xakamaynta mashruuca Wise, waxay kaliya ahayd mid xaq u leh inay eegaan faylasha kala duwan, si loo yareeyo cabbirka faylasha. Xaaladdan oo dhan waa in dhammaan koontaroolkani waa inuu dib u dhisto si uu u abuuro waxyaabo dhuleed oo shakhsi ahaaneed.
- Horumarinta arjiyada codsiyada dayactirka online-ka ah ee u direy joomatari sida faylka casriga ah ... aanan sii socon.
Bentley Prospects Diiwaangelinta
Bentley Cadastre muuqataa horumar degdeg ah a ah ee Bentley Map, si kastaba ha ahaatee by xaqiiqada ah in la hubiyaa in labada XM iyo V8 noqon lahaa ku meel gaar ah, dad badan oo naga sugaya dalka yaboohay of V8i waaba haajiraan maalgashiga laba jeer loo baahan yahay. sidoo kale arki doonaa ka biyodiiday ee ka mid ah adeegyada xogta in haysato soo dhaweynta wanaagsan sida isagoo aalad Postgre in badan waxaan soo dhugtay wanaagsan ka dib markii liisanka Oracle ah mashruuca weyn cadastral joogi karto $ 30,000 sanadlaha kaliya a Labo-processor ah.
Inta badan hirgelinta teknoolajiyada Bentley Systems waa wax khubaro ku talinaynaa mashaariicda cadastral heer dalka ama gobollada badan oo in kastoo ay noqon doonto mid xiiso leh si loo qiyaaso in ula dhacsan this for DGN la xidhiidha dhulka ay technology xariif ah oo kuu ogolaanaya in wac orthophotos 15 waa in ay ahaataa dheeraad ah 15,000 sababtoo ah kadibna 10 ilbidhiqsiyo dusha. Ama marka laga reebo sidoo kale On geofumar khariidad si la yaab leh ku leh codsiyada in ay yihiin awood laakiinse iyagu ma ay yihiin had iyo jeer sida indigestible by user celceliska, sida kiiska ee Bentley Geospatial Server, Project falsan iyo Geoweb Publisher in ay yihiin lagama maarmaan si loo fuliyo Bentley Cadastre.
Laga soo bilaabo 2011 Bentley Saxiix waa qayb ka mid ah Bentley Map V8i.
Bogga: Bentley Cadastre
Post Previous«Previous Samee sanduuqa xaraashka leh ee AutoCAD Macaamiisha 3D
Post Next AutoCAD mar walba ma jiroNext »
3 Jawaab: "Bentley Cadastre"
Taasi waa: waxay u ogolaataa horumarinta codsiyada macaamiisha iyo heerka adeegga (Intranet iyo web).
Sidan oo kale, waxaa suurtogal ah in aad wax ka beddesho macluumaadka faafinta ee ku saabsan ActiveX oo loo sameeyay websaydh, waxay ku hoos qoran tahay faylasha casriga ama adeegga muuqaalka webka (WFS) oo leh kantarool-dhaqameedka dhaqdhaqaaqa.
Juan Molinarez isagu wuxuu leeyahay:
Taas waxa ay loola jeedaa lakabyada aad sheegeyso:
«Waxay taageertaa horumarka ka hooseeya xiriiradahan:
»Oracle Spatial, 2 iyo xattaa 3 xitaa
ArcGIS, saddex lakab ».
Adeegyada digitization isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay wadaagista ....